नेपालकै इतिहासमा पहिलो पटक महिला गभर्नर, बधाईको ओहिरो – Eps Sathi
नेपालकै इतिहासमा पहिलो पटक महिला गभर्नर, बधाईको ओहिरो
September 28, 2021 710
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकको इतिहासमा पहिलो पटक महिलाले राष्ट्र बैंक प्रमुखको जिम्मेवारी सम्हाल्ने मौका पाएकी छन् । राष्ट्र बैंक प्रमुखको जिम्मेवारी सम्हाल्ने मौका पाएसँगै उनलाई बधाई दिनेहरुको ओहिरो लागेको छ ।
बहालवाला गभर्नर महाप्रसाद अधिकारि कोभिड पोजेटिभ भएपछि डेपुटी गभर्नर डा. निलम ढुंगानालाई कायम मुकायम गभर्नर बनेर राष्ट्र बैंक प्रमुखको जिम्मेवारी सम्हाल्ने मौका जुरेको हो।
गभर्नर अधिकारिलाई कोभिड पोजेटिभ देखिएकाले दैनिक कार्यको लागि ढुंगानालाई असोज २०७८ असोज ६ गते देखि लागू हुने गरि कायम मुकायम गभर्नर तोकिएको हो।
गभर्नर अधिकारी कोरोना संक्रमित भएका कारण निलम डा ढुंगानालाई कायम मुकायम नियुक्त गरिएको नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता तथा बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागका कार्यकारी निर्देशक देव ढकालले बताए ।
गभर्नर अधिकारी सामान्य अवस्थामा नफर्किदासम्मको लागि डा. ढुंगानाले कायम मुकायमको जिम्मेवारी सम्हाल्नेछिन् । अर्थ मन्त्रालयको पत्रमा अधिकारी निको भएर कार्यालय नआएसम्मको लागि तिम्सिनालाई कायममुकायम दिइएको उल्लेख छ।
असोज ५ गतेको परीक्षणमा पोजिटिभ देखिएपछि अधिकारीको अनुरोधमा अर्थ मन्त्रालयले मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरेर उक्त व्यवस्था गरेको हो। सामान्यतया गभर्नर नेपालमै भएको अवस्थामा यसरी कायम मुकायम गभर्नर दिने दिने चलन छैन।
तर पछिल्लो समय कोभिड १९ का कारण नेपालमै भएपनि कार्यकारी पदमा रहेका व्यक्तिमा कोभिड पोजेटिभ देखिएमा कायम मुकायम दिने गरिएको छ।
नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ को दफा ३१ मा अधिकार प्रत्यायोजनको व्यवस्था छ। यस व्यवस्थाअनुसार गभर्नरले बैंकको काम सुचारु रुपले सञ्चालन गर्न ऐनबमोजिम प्राप्त गरेको अख्तियारी डेपुटी गभर्नर वा बैंकका अन्य कर्मचारीहरुलाई सुम्पन सक्नेछन्।
Prevदक्षिण कोरियाबाट नेपालको सेयरबजारमा लगानी गर्नेहरुको संख्या बढ्दो
Nextकोरियाले सन २०२५ भित्र आकासमा उड्ने ड्रोन ट्याक्सी ल्याउने
कोरियामा रहेका विदेशी कामदारले 연말정산 विवरण पेश गर्नुपर्ने, हेरौं तरिका
एकै दिन करिब २३ हजारले डि म्याट खोले
केहि खुकुलो पार्नासाथ कोरियामा फै’लियो को’रोना, आज एकैदिन अहिलेसम्मकै सबैभन्दा धेरै सं’क्रमित थपिए